प्रकाशित गर्नुहोस् - यो कहिल्यै सजिलो भएको छैन - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
प्रकाशित गर्नुहोस् - यो कहिल्यै सजिलो भएको छैन
सम्पादकको पिक जुलाई 30, 2019 सेप्टेम्बर 11, 2019 जे कालो ब्लग, व्यापार, क्यालिफोर्निया, चीन, सांप्रदायिक समाचार, सम्पादकको पिक, फ्रीलांस लेखन, स्वास्थ्य, इस्राएलका, जीवन शैली, ओरेगन, राजनीति, रूस, विज्ञान, खेल, लेख सबमिट गर्नुहोस्, प्रविधि
साम्प्रदायिक समाचारले समाचार प्रकाशित गर्न सजिलो र दर्दनाक बनाएको छ। लागत तपाईंको समयको थोरै मात्र हो। यो सेट अप गर्न केहि मिनेट लिन्छ योगदानकर्ता खाता र त्यसपछि तपाईं मर्जीमा प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ! हामी तपाईंलाई वास्तविक, विस्तृत जीवनी लेख्न प्रोत्साहित गर्दछौं, किनकि प्राय दुई दुई लेख पछि, जीवनी गुगल समाचारमा पनि प्रकाशित हुन्छ! त्यसोभए जब हामी भन्छौं "आफ्नो बायो सेट अप गर्नुहोस् जस्तो कि तपाईकी आमाले यसलाई पढ्न सक्छन्," राम्रो, तपाइँको आमा साँच्चै यो पढ्न सक्छ।
धेरै साम्प्रदायिक समाचार लेखहरू "गुगल कार्बनिक खोज", साथै "गुगल समाचार" मा शीर्ष कथाहरूको बीचमा सूचीबद्ध गरिएको छ।
तपाइँको योगदानकर्ता खाता सेट अप गर्न को लागी १० मिनेट लाग्नेछ र अधिक समय तपाइँको जीवनी लेख्नमा खर्च हुनेछ। त्यस पछि, तपाईंसँग आफ्नै आफ्नै ब्लग छ। टाढा प्रकाशित! यो सजिलो छ। अवश्य पनि, तपाइँको काम गुणस्तर र तथ्य आधारित हुन्छ।
के सामुदायिक समाचार प्रदान गर्दछ ग्रह मा छिटो भन्दा बढ्दो खुला समाचार र ब्लग प्लेटफर्म मध्ये एक हो। हामी हाम्रो वेबसाइट मा एक मजबूत पाठक निर्माण गर्दै छन्। हाम्रो दुबै समाचार लेखहरू र ब्लग पोष्टहरू गुगल समाचारमा प्रकाशित हुन्छन्। हामी सबै प्रमुख सामाजिक मिडिया वेबसाइटहरूमा छौं।
तपाईंको काम एक्लो हुनेछैन। हामीसँग 700०० भन्दा बढी योगदानकर्ताहरू छन् र हामी गत तीन महिनामा प्रतिमहिरी करीव १०० योगदानकर्ताहरू थपेका छौं। त्यो हाम्रो उत्तम तथ्याistic्क पनि होइन। १० दिनको अवधिमा रेफरलहरूको संख्या गत महिनाको तुलनामा २००% भन्दा माथि छ। त्यो सहि छ। २००% अधिक वेबसाईटहरूले हामीलाई जुन भन्दा जुलाईमा जुलाईमा सन्दर्भित गर्‍यो। कुनै पनि लेखकका लागि CN, नयाँ वा स्थापितको लागि त्यो राम्रो समाचार हो। हामीसँग बलियो रेफरल आधार छ र हामी परम्परागत खोजमा पनि राम्रो गर्छौं।
CN - एक योगदानकर्ता बन्नुहोस् र लेख सबमिट गर्नुहोस्
यदि तपाईं लेखक हुनुहुन्छ र तपाईंसँग बिल्कुलै फरक दृष्टिकोण छ, र हुनसक्छ केही दृश्यहरू पाठकहरू मूलधारको समाचारबाट प्राप्त गर्न सक्दैनन्, हामी तपाईंलाई मन पराउनेछौं। हामी बिभिन्न प्रकारका समाचार सेवा हौं र हामीलाई यसको गर्व छ कि यो एकदम राम्रो पाइएको छ भनेर हामी गर्व गर्दछौं। यदि तपाईं कर्पोरेट अमेरिकाका लागि लेख्न चाहानुहुन्छ र उनीहरूको बारेमा के लेख्ने र कसरी आफ्नो राय बनाउने भनेर बताउन चाहनुहुन्छ भने यो तपाईंको लागि ठाउँ होइन। हामी मानिसबाट मूल काम चाहन्छौं जुन समाचार रिपोर्ट गर्न इमानदार हुनेछ।
हामी हामीलाई सोध्न सक्छौं हामी किन यति राम्रो गरिरहेछौं र हामीले यसको उत्तर दिन कोशिश गर्यौं यस लेखमा:
तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईको सामान्य योगदान सेवाहरु भन्दा चारवटा कदमहरु किन लिन्छौं।
हामीसँग भएका सबै सफल कम्पनी जस्तै साम्प्रदायिक समाचारमा नियम र नीतिहरू। हामी यसलाई लेखकको लागि सकेसम्म सजिलो र मैत्री बनाउने प्रयास गर्दछौं, तर तपाईंले योगदानकर्ता बन्नु अघि तपाईंले नियमहरू राम्ररी पढ्नुपर्दछ।
ब्लगरहरू चाहन्थे सांप्रदायिक समाचार स्वतन्त्र लेखक समाचार रिपोर्टरहरू रिपोर्टिंग काम लेखकहरू चाहन्थे
यहाँ चार्जमा को छ? रोजेले राजीनामाले उत्तराधिकार प्रश्नहरू ल्याउँदछ
राज्यहरू, प्रशंसकहरू सबै खेल खेल मा सामिल छन्